कोरोनाका कारण घरमै थु'निएका यी बालकको तस्बिर भयो भा'ईरल ! - Filmy News Portal Of Nepal
कोरोनाका कारण घरमै थु’निएका यी बालकको तस्बिर भयो भा’ईरल !
चिनको वुहान शहरबाट सुरु भएको कोरोना भा’इरसको म’हामा’रीले यतिखेर बिश्व नै आतं क मच्चिरहेको छ, यस लामो समय बिच आज सम्म कोरोना वि’रुद्धको खो’प तथा रो’कथा’मको लागि कुनैपनि औषधी अझै सम्म बन्न सकेको छैन । कोरोनाको सं-क्रमण नि-यन्त्रण र रो’कथा’म गर्न विश्वका धेरै देशले ल’क’डाउनका गरेछन् ।
ल’क’डाउनका कारण सबैको दैनिकी प्र’भावित भयो । सबै मानिस घरभित्रै बसे । ल’क’डाउनले बालबालिकाको जीवनमा भने ठू’लो उ’त्तारच’ढाव ल्याइदियो । यस्तै एक बालकको तस्बिर अहिले सामाजिक संजालमा निकै भा’इरल बनेको छ ।
ती बालक २ महिना घरमा थु’निए । जब ल’क’डाउन खुलेर विद्यालय जानुपर्ने भयो अभिभावकलाई स’मस्या नै पर्‍यो उनको स्कूल ड्रेस ठीक नै भएन । उनकी आमाले दु:ख गर्दै ड्रेस लगाइदिएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा अहिले निकै चर्चामा छन् । – एजेन्सी